July 24, 2019 - ThutaStar
July 24, 2019 Thuta Star 0
ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၉၊ ဗစ်တိုရီးယားလေးရဲ့ အမှုကို ဒီနေ့နေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိခရိုင်တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို ဒီကနေ့ စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ အမှုစစ်ဆေးချက် ပထမပိုင်းအပြီးမှာ မိခင်ဖြစ်သူ ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ရ ပါတယ် နော် …။ အမှုဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ ၆ ရက် […]
သ​င်္ဘောရွတ်​ ကို ​ရေထည့်​ ပြီး၃ ခွက်​ ၁ခွက်​ တင်​​အောင်​ ကြိုပါ 🍀ထန်းလျက်​ သင့်​​သောအလုံး​ရေအား လုံးကိုအရည်​ကြို ပါ ၂မျိုး​ပေါင်းစပ်​ပြီး ​​ဖျော်​၍ ​သောက်​ပါ 🍀၁​နေ့  ၃ချိန်​ ​သောက်​ပါ လက်​​တွေ့သိရပါမည်​ ​ရောဂါ မဖြစ်​​သေးသူများလည်း ကြိုတင်​ကာကွယ်​၍ ​သောက်​နိင်ပါသည် Credit […]
သံပယိုရည်နဲ့ ရေနွေးကိုသာက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သကြားကို မထည့်ပါနဲ့ ပူနေတဲ့သံပယိုရေနွေးဟာ အေးနေတဲ့ သံပယိုရည်ထက်ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။ ကဇွန်းဥအဝါနဲ့ခရမ်းရောင်တို့မှာလည်း ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့အရာကောင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁။ ညနှောင်းပိုင်းအစားအစာစားခြင်းဟာအစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ်။ ၂။ တပတ်တွင် ကြက်ဥ၄လုံးထက်ပို၍ မစားမိပါစေနဲ့။ ၃။ ကြက်အဆီဘူးကို စားခြင်းဟာအစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ […]
ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အကြမ်းစား ကြော်ငြာတစ်ခုနဲ့ ဆွဲဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ပရိသတ်တွေကို အမိုက်စား ပုံရိပ်ကလေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ကောက်ကြောင်းအလှကလည်း ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သင်ဇာက သူဘယ်သူလဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးထားပြီး ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သင်ဇာဝင့်ကျော် […]
အရေးအကြီးဆုံး သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားလေး ရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်း…
ဒီနေ့ ( 24. 7. 2019 ) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ပိုင်း Victoria လေးရဲ့မိခင်အားစစ်ဆေးချက်အရ အောက်ပါအချက်များအား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ – အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့က Victoria လေးရဲ့အကြိုအပို့ကားသည် ပို့နေကျကားမဟုက်သည့်အပြင် လာပို့သည့်ဆရာမမှာလည်း ပို့နေကျဆရာမဟုက်ကြောင်းထွက်ဆိုသည်။ – မိခင်မှကလေးအားဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိမေးမြန်းစဉ် ( ကိုကိုလုပ်တာ ) ပြောဆိုပါသည်။ […]
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ဒုတိယအကြိမ် ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအပြီးမှာ ဆရာမနှင်းနုကို ဒုတိယတရားခံအဖြစ် ဦးတိုက်လျှောက်…
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရတဲ့ အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးချိန်းမှာတော့ တရားလို မိခင်ကိုယ်တိုင်က ကလေးကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခဲ့သူရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားခွင်မှာ ထွက်ဆိုချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တရားခွင်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ ဒီအမှုမှာ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းက […]
ဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှ မရှိတဲ့ မိုင်းလုပ်သားငမွဲလေးကို အချစ်တခုတည်း အတွက် လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ရုရှားသူလေး…
ဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှ မရှိတဲ့ မိုင်းလုပ်သားငမွဲလေးကို အချစ်တခုတည်း အတွက် လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ရုရှားသူလေး အချစ်က ငွေကြေး ဂုဏ်ဒြပ်တွေနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်ပဲ အချစ်ဟာ အချစ်ပဲ ဆိုတာကို ရုရှား အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သက်သေပြခဲ့ ပါတယ်။ မိန်းကလေး ရှားပါးတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဘာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပဲ မိန်းကလေး […]
ယောက်ျားက ဗိုက်တစ်လုံးနှင့် ထားသွားလို့ ရန်ကုန်သိမ်ကြီးဈေး.. နားက ကားတွေကြာွးထဲမှာ နှစ်နဲ့ချီအိပ်ခဲ့ရတဲ့ ချင်းလူမျိုး သားအမိ(ရုပ်သံ)
ချင်းပြည်နယ်ဖလမ်းမြို့ကနေ မိုင်ဆန်သဲ (ခ)မူမူဟာ အသက် (၁၉)နှစ်အရွယ်မှာ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီး တစ်ယောက်ထဲဆင်းလာခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ၃၇ လမ်း ထမင်းဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ချိန်မှာ ဘရင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်မိပြီး၂၉ လမ်းမှာ အိမ်ငှားပြီး ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ မိုင်ဆန်သဲမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီး မမွေးခင်မှာ သူ့ယောက်ျားက ထားခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆင်းလာတုန်းက […]
စွမ်းအားကြီးမားပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့ အင်္ဂါသား၊သမီးတွေဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရင် အရှုံးမပေးဘဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ်ကာကွယ်မယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြတဲ့ အင်္ဂါ သား၊သမီးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖွင့်ဟလေ့မရှိတာကြောင့် အချစ်ရေးမှာ အထီးကျန်တဲ့ခံစားချက်မျိုး အမြဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို စကားလုံးတွေနဲ့ နာကျင်အောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့ […]
ချစ်သူကို ချစ်တဲ့နေရာမှာ စံပြုလောက်တဲ့ အမျိုးသားများရဲ့ အပြုအမူများ ..
မိန်းကလေးတွေအတွက် သူတို့ချစ်သူဆီက အချစ်ခံရမှု၊ အလေ့းပေးခံရမှု၊ ဂရုစိုက်ခံရမှု၊ တန်ဖိုးထားခံရမှုတွေဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကို အချို့ကောင်လေးတွေက နားမလည်နိုင်ကြပါဘူး။ ယောက်ျားတိုင်းနားလည်နိုင်တာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်ပြီး ချစ်တတ်လွန်းသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးက တည်မြဲတယ်ဆိုတာ အမျိုးသား အပေါင်းတို့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ လက်လုပ်ပစ္စည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေရှည်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တန်ဖိုးနည်းတာများတာ […]